12 Imikhonyovu Emikhulu Yokuhamba Ukugwema Emhlabeni Wonke | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Ikhambo Tips > 12 Imikhonyovu Emikhulu Yokuhamba Ukugwema Emhlabeni Wonke
Isikhathi sokufunda: 9 amaminithi
(Kugcine ukubuyekezwa On: 03/09/2021)
Umhlaba uyindawo enhle, kodwa abahambi okokuqala bangawela ezingibeni zokuvakasha futhi babe yizisulu zemikhonyovu emikhulu yokuhamba. Lawa 12 imikhonyovu emikhulu yokuhamba yokugwema umhlaba wonke; kusuka eYurophu kuya eChina, nanoma ikuphi.
1. Imikhonyovu Yezokuvakasha Ukugwema Umhlaba Wonke: Ukukhokhiswa KwamaTekisi Amaningi - Ukuchezuka
Izimoto ezisindayo, umshayeli wetekisi ekutshela izindaba zedolobha, futhi ukubukwa okusha okuvela ewindini kwenza kube lula kakhulu ukuwela kumkhonyovu wokuhamba ngetekisi okweqile.
Ukuzulazula ngetekisi kubonakala kuyindlela elula kakhulu yokuhamba njengesivakashi, kepha kungahle kube ngomunye wemikhonyovu emikhulu yokuhamba emhlabeni wonke. Njengomvakashi ngeke wazi umzila oshesha kakhulu futhi ohamba phambili osuka esikhumulweni sezindiza uye ehhotela, noma kusuka kokukhangana kokunye, ngakho-ke abashayeli bamatekisi bangakuhalalisela bakucele isilinganiso esinyantisayo noma bakuthathe ujikeleze kakhulu, ngohambo okungafanele luhlale ngaphezu kwe- 15 kimi.
Ungakugwema Kanjani Ukushaja Amatekisi?
Cwaninga kusengaphambili ngenani lamatekisi elamukelwe ku- travel uya khona. Ngaphezu kwalokho, qiniseka ukuthi unohlelo lokusebenza olukhulu lwemephu, lokho akudingi i-Wi-Fi, ukuze ubheke umzila ngaso sonke isikhathi, futhi okubaluleke kakhulu, khetha inkampani ethembekile yamatekisi, noma ukuhamba ngesitimela.
Geneva ukuze Zermatt With A Isitimela
Bern Zermatt With A Isitimela
ILucerne iya eZermatt Enesitimela
2. Ukuchitheka ezingutsheni zakho - ubuqili bejuba
Uma uhlela ukuya e-Argentina, Ngokwesibonelo, kufanele wazi ukuchitheka kwejuba kumkhonyovu wakho wokuhambela izingubo. Lolu hlobo lomkhonyovu wokuhamba luthandwa kakhulu eBuenos Aires, lapho kufika indawo enobungane isondela kuwe, ukufuna ukusiza njengoba kukhona ukuchitheka kuzo zonke izingubo zakho.
Cabanga nje ubabaza maphakathi nedolobha noma unosuku oluhle epaki, eqalaza, kuthi kungazelelwe kufike umuntu ongamazi onomusa kuwe, ukukwazisa ukuthi kukhona ukuchitheka kuzo zonke izingubo zakho. Isikhwama usibeka emhlabeni, aqalaze emangele ngokuchitheka, futhi okwamanje ipasipoti, isikhwama semali, futhi konke okwakho okuyigugu akusekho.
Ungakugwema Kanjani Ukuchitheka Kwezingubo Zokukhwabanisa Kwezingubo?
Hlola njengendawo yasendaweni, qaphela okuzungezile, bese uzama ukubeka amehlo akho phambili.
ILucerne iya eLauterbrunnen Ngesitimela
Geneve eLauterbrunnen Ngesitimela
3. Imikhonyovu Yezokuvakasha Ukugwema Umhlaba Wonke: Umkhonyovu we-ATM Travel
Imali yenza umhlaba ujikeleze, ngakho kusobala ukuthi omunye wemikhonyovu emikhulu yokuhamba emhlabeni uhilela imali. Omunye wemikhonyovu emikhulu yokuhamba emhlabeni wonke umkhonyovu we-ATM lapho umfundi wekhadi lesikweletu asuswayo ngokuyisisekelo ekopisha ubuqiniso bakho bese ebasebenzisela ukusula yonke ibhalansi yakho.
Ungawugwema Kanjani Umkhonyovu we-ATM?
Uma kunesidingo, udwebe imali ebhange elikhulu nelaziwayo i-ATM. Ngo amabhange amakhulu eYurophu, kukhona ukuphepha, ngakho amathuba okuba nokufinyelela kubafundi bekhadi le-ATM asondele kuziro.
EMunich kuya eHallstatt Ngesitimela
Innsbruck kuya Hallstatt With A Isitimela
Passau waya eHallstatt Ngesitimela
URosenheim waya eHallstatt Ngesitimela
4. Bump Futhi Bamba
Omunye wemikhonyovu yakudala yokuhamba emhlabeni, iqhubu nokubamba kuyathandwa ku- izinto zokuthutha umphakathi, nasezimpawu zomhlaba. Kungenzeka ukuthi usesitimeleni, umasipala, noma ulinde esigcawini sasePrague iwashi elidumile lapho ngokuzumayo othile equbuka kuwe.
Ngenkathi kungaba yingozi, kungenzeka kakhulu ukuthi kube yi-bump-in ehlelelwe ukukhethwa. Kungaba ukuhlukaniswa komzuzwana, a “sorry”, nesikhwama sakho semali, bukela, noma ubucwebe abukho. I-bump and grab scam ingenye yezinto ezibaluleke kakhulu okufanele wazi ukuthi nini e-Europe.
Ungayigwema Kanjani I-Bump Nokubamba?
Shiya izinto eziyigugu egumbini lehhotela, futhi usakaze yonke into ohamba nayo: isikhwama esikhwameni sebhokisi langaphakathi ngokwesibonelo.
EParis Nice With A Isitimela
I-Cannes iya eParis Ngesitimela
I-Cannes iya eLyon Ngesitimela
5. Imikhonyovu Yezokuvakasha Ukugwema Umhlaba Wonke: Umhlambi
Ngokufana ne-bump bese ubamba, umkhonyovu wesixuku, kulapho ngokuzumayo ugcwala iqembu labantu ongabazi, kahle ezibukeka zingaziwa kuwe. Empeleni, laba bantu abangabazi bazana kahle, futhi kuhlelwe kahle ukuhlangana okuyinqaba, noma uswebezane. Ngale ndlela ibukeka imsulwa ngokuphelele, ngenkathi wena uzungezwe futhi pickpocketed.
Lokhu kuvame ukwenzeka endaweni enabantu abaningi, lapho leli qembu lihlangana khona nezixuku nezinxushunxushu. Baqala ukukuzungeza futhi bakuphazamise njengoba abanye bebamba konke. Ukugcina imali yakho endaweni eyodwa kungenye ye- 10 amaphutha wokuhamba okufanele uwagweme eYurophu.
Ungawugwema Kanjani Umkhonyovu WeSwarm?
Mane uziqhele kude nezixuku, futhi uziphu ijazi lakho, noma unake izinto zakho, okungcono, beka noma yisiphi isikhwama phambi kwakho.
6. Indawo Enobungane
Isihambi esihle futhi esinobungane umkhonyovu odumile wokuhamba emhlabeni wonke. Ukuthi uhamba eRed Square noma eParis, kuzohlala kukhona indawo enobungane enikela ngosizo lwabo ukufinyelela i-Eiffel Tower noma ikubonise isikhathi esihle edolobheni.
Ngaphezu kwalokho, zizosiza kakhulu ekuboniseni wonke amakilabhu amakhulu azungezile, ukuthi uzoba nomkhonyovu kuphela ngakusasa ekuseni, ukuvuka, nokubona ukuthi imali yakho ihambile. Ngakho, uhambo olulodwa ngokwesibonelo, emhlabeni wonke kungaba yithuba elingavamile lokuhlangana nabantu bendawo, kodwa futhi kungaphenduka iphupho lakho elibi kakhulu.
Ungawugwema Kanjani Umkhonyovu Wokuhamba Wendawo Onobungane?
Ukuhlangana nabantu bendawo ekuhambeni kwakho kuhle, futhi okunye kokuhlangenwe nakho okuhle kakhulu. Nokho, qaphela ukuthi ngubani omethembayo, futhi uchithe ubusuku no. I-adventure ezweni ongalazi ngokushesha ingaphenduka inhlekelele, ngakho-ke qaphela.
7. Imikhonyovu Yezokuvakasha Ukugwema Umhlaba Wonke: Umkhonyovu Wesongo
Mahhala izikhumbuzo ezivela ezweni langaphandle kuzwakala kumangalisa, kodwa azikho ngempela izinto zamahhala emhlabeni esihlala kuwo. Ngakho-ke, ungaweli umkhonyovu wesongo wamahhala ovame ukufaka owesifazane wasendaweni osondela kuwe emomotheka, ukufaka isongo esihlakaleni sakho.
Ukumomotheka nobungane, bazokunikeza amasongo ayiqiniso noma imigexo ongaya nayo ekhaya, ngenkathi sonke isikhathi esinye isandla sabo sifinyelela isikhwama sakho semali, nobucwebe. Ukunikela ngento enhle futhi emahhala kuyisiphazamiso esikhulu futhi kusebenza kubavakashi abaningi abangenacala.
Ungawugwema Kanjani Umkhonyovu Wesongo?
Ungaweli njengezikhumbuzo zamahhala, bese uvula nje amehlo akho, futhi ngomusa wenqabe ukwamukela noma imiphi iminikelo yamahhala evela kubantu ongabazi.
8. Ingane Encelayo
Ngigqoke izingubo ezilusizi, kungcolile, ukucela imali noma ukudla, ingane encengayo ingomunye wemikhonyovu ebabazekayo yokuhamba emhlabeni. Ukusuka eYurophu kuya eChina, kunezingane ezime eceleni komgwaqo, ukucula ngedola ezigcawini eziphakathi, noma ngokushaya iwindi letekisi.
Imvamisa lezi zingane azilahlekile njengoba zibukeka, kodwa bathunyelwa ukudlala indima. Ngokusobala, kukhona izingane ezidinga ngempela ukudla nosizo.
Ungawugwema Kanjani Umkhonyovu Wokuncenga Ingane?
Lokhu kuyinkohliso ngoba umhlaba ugcwele izingane ezihluphekayo ezingenayo enye indlela ngaphandle kokuncenga. Nokho, unganikela ngokubathengela ukudla noma usize ngenye indlela, kunokunikeza imali. Ngale ndlela, ungabheka ukusabela kwabo, futhi uma ngabe bedinga ngempela noma ngemuva nje kwesikhwama semvakashi.
I-Luxembourg iya eColmar Ngesitimela
I-Luxembourg iye eBrussels Ngesitimela
I-Antwerp iya eLuxembourg Ngesitimela
IMetz iya eLuxembourg Ngesitimela
9. Imikhonyovu Yezokuvakasha Ukugwema Umhlaba Wonke: Ukuheha Kuvaliwe
Uhlole amahora okuvula ngaphambi kwesikhathi, kodwa kukumangaze lapho ufika ethempelini noma uthenga umuntu wasendaweni ekutshela ukuthi kuvaliwe. Khona-ke, lapho bebona ukudumala kwakho, banikela ngokukusa kwenye indawo ebabazekayo noma esitolo, okungcono kakhulu kunokuvaliwe.
Abantu bendawo banganikela nge-adventure emangalisayo, kodwa empeleni bayakuhlwitha, ngokucela imali ebiziwe yokungena, noma ukukuyisa lapho bethola khona ikhomishini enonile.
Ungawugwema Kanjani Lo Mbumbulu Wokuhamba?
Ukuvakasha izindawo ezingasetshenziswanga kuyamangalisa, vele uqiniseke ukuthi uhlola indawo ezungezile futhi uma kukhona ezinye izindlela. Ngaphezu kwalokho, cwaninga kusengaphambili ngezindawo ezinhle kakhulu ongazivakashela eYurophu. Uma ukukhanga kumahhala, lapho-ke asikho isizathu sokuyifaka esikhundleni sentengo ephezulu, futhi okufanayo ezitolo ezinezibuyekezo ezinhle.
IZurich iya eLucerne Ngesitimela
UBern waya eLucerne Ngesitimela
IGeneva iya eLucerne Ngesitimela
IKonstanz iya eLucerne Ngesitimela
10. Ake Ngithathe Isithombe Sakho
Ukuhamba wedwa kungaba kuhle, futhi ngezikhathi ezigcwele ukuzisola akekho umuntu onaye ongakwenza isithombe esiphelele semidiya yezenhlalo. I-Big Ben noma i-Firenze ngemuva, you look around and then they come up to you offering to take an amazing picture, kusuka ekhoneni elikhulu.
2 imizuzwana kamuva ikhamera yakho nayo yonke imifanekiso emihle ihambile, ngoba umfokazi othandekayo ubaleke nabo. Lokhu kungenzeka noma kuphi emhlabeni, kunoma ngubani, ngoba yini amathuba okuthi lokhu kuzokwenzeka? kepha kuyenzeka.
Funa ezinye izivakashi, mhlawumbe abahambi bodwa futhi, noma imibhangqwana. Le yindlela ephephe kunazo zonke yokuthola isithombe esifanele nokugcina ikhamera, futhi ngokushintshanisa, bacela ukuthatha isithombe sabo.
11. Imikhonyovu Yezokuvakasha Ukugwema Umhlaba Wonke: ISwitcheroo
Indlela engcono yokuphatha imali lapho usohambweni ukuba nezikweletu ezincane nawe ngaso sonke isikhathi. kungenjalo, qaphela ngezikweletu ezinkulu, lapho ukhokha abashayeli bamatekisi noma ezindaweni zokudlela zasendaweni. Ungahle unikeze isikweletu esikhulu ngenkokhelo encane, kepha abamukelayo bazokwenza sengathi bayalahla isikweletu esikhulu bese beyishintshela is s encane kakhulu. Ngale ndlela, bashintshanisa isivakashi.
Abaphathi bezimali, abashayeli bamatekisi, noma oweta, kungaba abadlali kulo mkhonyovu weSwitcheroo. Uzoba yolahleko olukhulu lapha, uma kungenjalo uqaphele.
Ungawugwema Kanjani Umkhonyovu weSwitcheroo?
Yisho inani lemali oyikhokhayo, futhi wazi ushintsho okufanele ngabe uluthola.
12. Imikhonyovu Emikhulu Yokuhamba Ukugwema Emhlabeni Wonke: AbaFundi BesiNgisi Abalangazelela
Bakhuluma isiNgisi esaphukile kodwa bayakuncenga ukuthi ubafundise. Abafundi baseNgilandi abalangazeleleni bacathamela ezindaweni zokudlela nezindawo zokudlela, izoqala ingxoxo enobungane nawe, bese ngikucela isifundo sangasese sesiNgisi egumbini lakho lehhotela.
Kanye ehhotela, umfundi waseNgilandi onentshiseko angaphenduka indawo yokulala ebusuku, futhi uvuka esikhwameni semali esintshontshiwe nepasipoti. Iqiniso akunakwenzeka ukuthuthukisa ikhono lolimi ngobusuku obubodwa, futhi nomuntu ufuna ukuqhuba isiNgisi sakhe, lesi sifundo akudingeki senzeke egumbini lehhotela noma ngaphezulu kotshwala.
Ekuphetheni, ukuhamba okuhlakaniphile kuyindlela engcono yokuhamba kulezi zinsuku, nomaphi emhlabeni. Isizathu ukuthi imikhonyovu yezokuvakasha iba nzima ngokwengeziwe ukuveza. Lokho kushiwo, akukaze kube lula ukuhamba uzungeze umhlaba kunanamuhla.
Lapha e Londoloza Isitimela, sizojabula ukukusiza uhlele izindawo zakho zokuzijabulisa ukuze uvakashele futhi uqedele uhambo lwakho ngokujabula ngokugwema imikhonyovu yokuhamba.
Ngabe ufuna ukushumeka okuthunyelwe kwebhulogi lethu “Imikhonyovu Engu-12 Emikhulu Yokuhamba Ukugwema Umhlaba Wonke” kusayithi lakho? Ungakhetha ukuthatha izithombe zethu nombhalo futhi asinike credit enesixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fzu%2Ftravel-scams-avoid-worldwide%2F- (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
Ngaphakathi une izixhumanisi lwethu IsiZulu kokwehla Amakhasi, kodwa siphinde sibe https://www.saveatrain.com/ru_routes_sitemap.xml, futhi ungakwazi ukushintsha / ru ukuba / fr noma / izilimi de nokuningi.
Kuhle Honeymoon Izindawo EYurophu
5 Kuhle Iziphuzo Local Ukuze Phuza Futhi Zama EYurophu
Qeqesha Ukuhamba EBelgium, Qeqesha Ukuhamba iBrithani, Qeqesha Ukuhamba eFrance, Qeqesha Ukuhamba Germany, Qeqesha Ukuhamba Italy, Izikhangibavakashi Europe